Mido oo ka hadlay in Salah uu ka mid noqday magacyada saddexda xidig ku tartami doont abaal marinta FIFA The Best – Gool FM
(Liverpool) 03 Sab 2018. Mohamed Salah ayaa wuxuu ka mid noqday liiska saddexda laacib isugu soo hartay inay ku dagaalamaan ku guuleysiga abaal marinta FIFA The Best.
FIFA ayaa ku dhawaaqday in xidigaha Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo iyo Luka Modrić ay ugu dambeyn noqdeen saddexda xidig la filayo in midkood uu ku guuleysan doono abaal marinta sanadlaha ah ee FIFA.
Ahmed Hossam Mido ayaa sheegay inay tahay arin uu ku faanayo in laacibka kooxda Liverpool ay isku dalka kasoo wada jeedaan uu ugu dambeyn abaal marintan kula dagaalamo xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Luka Modrić.
“Waa arin ay ku faanayaan dhamaan shacabka reer Masar in Mohamed Salah uu ka mid noqdo liiska xidigaha ku dagaalamaya abaal marinta FIFA The Best”.
“Waa arin aan la rumeysan Karin, waa arin weyn”.
Mohamed Salah ayaa xili ciyaareedkii lasoo dhaafay ka sameeyay kooxda Liverpool rikooro cajiib ah, wuxuuna kusoo guuleesatay abaal marinta gool dhalinta iyo laacibka sanadka ee horyaalka Premier League.
“Aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah waxaan qeyb ka ahay mid ka mid ah kooxaha ugu fiican aduunka”… Lacazette